Waa maxay ujeedka mucaaradka dowladda Soomaaliya ? – Somali Top News
December 23, 2018 Somali Top News	0 Comments
Dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxa ay xilka qabatay iyadoo aan laheyn wax mucaarad ah, balse shantii bilood ee ugu horeysay kadib waxaa bilowday in la mucaarado.
Mucaardnimada rasmiga ah ma ahan mid wax dumisa ee wax bey dhistaa, markii Madaxweyne Farmaajo uu Ra’iusl Wasaare u magaacabay Mudane Xasan Cali Kheyre durbadiiba waxaa soo ifbaxday in la mucaarado dowladda oo dhan iyadoo laga sheegayo wax aan dalka iyo dadka dan ugu jirin.
Dowlad waliba waxey leedahay siyaasiyiin iyo xubno katirsan oo mucaarada wax qabadka dowladda iyo khaladaadka ka dhaca, laakiin mucaaradka Soomaaliya ma ahan mid kaa ka duwan.
Tusaale ahaan xubnaha siyaasiyiinta ah ee mucaaradkan Trump waxaa jecel shacabkooda maxaa yeelay waxey u hadlaan baahida dadka iyo danta dalka.
Xildhibaano katirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasyiyiin dalka xilal kala duwan ka soo qabatay ayaa wax maala yacni ah ku dhaliila dowladda hana qaaday ee Federalka Soomaaliya.
Ma’ eegaan guulaha waa weyn ee la gaaray iyo halka loo socdo kaliya waxeey ka hadlaan halka ay dantooda ka arkaan, waxaana la yaab ah iney arrimahaasi ku kalifaan dano shaqsiyadeed sida lacag iyo xil.
Dhawaan ayey aheyd markii Madaxweynaha Mooshin laga keenay si xilka looga qaado, balse ay ka noqdeen Todobaad kadib iyagoo markii hore ku eedeeyay qiyaano Qaran iyo in Dastuurka uu hareer maray.
Heshiiska hadda dhexmaray mucaaradka iyo dowladda waxaa laga dhexli karaa faa’idooyin badan oo dalka muhiim u ah hadii la iska kaashado sidii wadanka loo gaarsiin lahaa himilooyinka waa weyn ee lagu taamayo.
← Burundi military opposes Somali withdrawal plan
Maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray Guddiga Maaliyadda iyo Gudoomiyaha Golaha Shacabka? →
Dawlada Jabuuti Geeska Afrika Miyaa Laga Tirtiray?
September 6, 2018 Somali Top News 0